FIRONANA MAMONJY TRABOINA : Lasa anararaotan’ireo Mpanohitra ny fomba ratsiny
Tsy levona fa mbola manjaka eto amin’ny Firenena ny fomba ratsin’ireo mpanao politika sasany. 28 février 2022
Fahazaran-dratsy izay tsy mikatsaka afa-tsy izay hahasoa ny tenany, sy ny antokony ary fomba ratsy mitady hatrany ny fomba rehetra izay hahazoana seza. Roa taona eo sisa dia hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena i Madagasikara. Araka izany, izao sahady dia efa manao izay ho afany tanteraka mba hanasongadinana ny tenany ireo mpanao politika izay mikatsaka ny ho tonga eo amin’ny Fitondrana. Heverina ho efa mirona mankany amin’ny fanaovana fampielezan-kevitra alohan’ny fotoana ihany koa. Tsy izany anefa no olana fa ny fomba ratsin’izy ireo, izay manaratsy ny hafa mba hahazoana ny fon’ny vahoaka. Fomba ratsy manararaotra ny fahoriam-bahoaka ihany koa toy ny efa fanaon’ny Filoha teo aloha, Ravalomanana Marc sy ireo mpiara-dia aminy ao anatin’ny Rodoben’ny mpanohitra.
Rivodoza efatra nifanesy izay no nandalo teto Madagasikara hatramin’ny fiandohan’ity taona 2022 ity. Ny roa tamin’ireo no rivodoza mahery vaika ary ireo mponina avy any amin’ny Faritra Atsimo Andrefana iny no tena voa mafy tamin’izany. An’aliny maro ireo traboina, tao ireo namoy havana aman-tsakaiza ary tao ihany koa ireo rava fananana tanteraka tao anatin’ny indray mipi-maso. Mahakasika ireto farany manokana no toa lasa ampiasan’ireo mpanohitra hanaovana ny fomba ratsy ara-politikany izay hanararaotana ahazoana fahefana.
Fanavakavahana ireo traboina ?
Nitondra takaitra goavana tamin’ireo Distrika mandrafitra ny Faritra maro amin’ny ilany Atsimo Andrefan’ny Nosy iny ireo rivodoza nifandimby nandalo tato anatin’ny iray volana izay. Tsy nanadino ireo traboina tamin’izany ny Fitondram-panjakana fa nitondra fanampiana toy ny sakafo masaka, vary sy ireo kojakoja isan-karazany ilaina amin’ny fiainana andavanandro. Tsy nanavahan’ny Filoha Andry Rajoelina firehana politika na fiaviana ny fanomezana fanampiana nandritra ny fidinan’izy ireo mivantana nijery ny fahavoazan’ireo vahoaka. Nisitraka izay fanampiana avy amin’ny Fitondram-panjakana izay avokoa ny vahoaka rehetra ary niara-nihinana tamin’ny sakafo masaka nokarakarain’ny fikambanana Fitia.
Na tany amin’ireo Faritra lasibatra, na teto an-drenivohitra izay azo lazaina ho maivana ny fiantraikan’ilay rivodoza aza dia samy nahazo ny anjara fanampiana avy amin’ny Fanjakana foibe avokoa. Nahita izany ireo Mpanohitra dia nitondra ny anjara biriky avy amin’izy ireo ihany koa. Fihetsika tena mendri-piderana tokoa izany saingy nibahan-toerana sy hita nibaribary hatrany ilay fitiavan-tseza fa tsy fitiavana ny mpiray tanindrazana. Araka ny fitarainana sy ny loharanom-baovao azo avy amin’ireo traboina dia izay olona mpanohana azy ireo ihany no nahazo fanampiana. Izany hoe, ireo traboina manohana ny Fitondram-panjakana dia tsy nisy nahazo avokoa. Tsy azo ihodivirana ihany koa fa tsy maintsy nisy ny fanambazana an’ireo olona nomena fanampiana mba hanohana sy hanara-dia azy ireo ao anatin’ny firehan-kevitra politikany.
Mananontanona ny fifidianana izay ho filohan’ny Repoblika. Ato anatin’ny roa taona dia hiatrika izany indray ny vahoaka malagasy. Mafampana araka izany ny fifanenjanana eo amin’ireo mpanao politika izay mitady ny hirika rehetra mba hahatongavana eo amin’io toerana io. Mitady ny paikady rehetra ireo mpanao politika rehetra ka anisan’ny tetika ampiasain’izy ireo amin’izany ny fanaratsiana ny Fanjakana. Fanaratsiana ny asa vitany izay ambaran’ireo Mpanohitra fa tsy mamaly velively ny filàn’ny vahoaka malagasy akory. Moa ve ireny sekoly manara-penitra ireny sy ireo hopitaly manara-penitra ireny tena tsy ilain’ny zaza malagasy sy ny vahoaka malagasy tokoa ?
Hatreto dia mbola mibahan-toerana ny fanoherana be fahatany ataon’ny ekipan-dRavalomanana, fanoherana miorina amin’ny fanaratsiana ary na hatramin’izao loza mihatra amin’ny Firenena eo anatrehan’ny fandalovan’ny rivodoza izao aza dia mbola vitan’izy ireo ny mandefa fanaratsiana ho an’ny Mpitondra. Ny fihetsika faran’izay kely indrindra, ny fitantanana sendra nibolisatra tahaka ireny nahazo ny Minisitry ny Fitsarana teo aloha, Imbiki Herilaza ireny dia efa ahitan’izy ireo tsikera mivaivay.
Tsy filaminana misy ambadika politika ?
Baiko nomen’ny Filoha Andry Rajoelina an’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta ny tsy maintsy anaovan’izy ireo fidinana ifotony eny an-kianja. Amin’izao andron’ny rivodoza mahabetsaka ny traboina izao dia vao mainka mihamafy io fitakiana amin’ny fanaovana fidinana ifotony io. Na ireo Minisitra natao hisahana ny filaminana sy fandriam-pahalemana aza dia tsy maintsy midina eny an-kianja manampy sy mitondra fankaherezana ho an’ny vahoaka niharan’ny loza. Ao anatin’izany indrindra no nitondran’ny mpamakafaka ara-politika ny ahiahy hoe : sao misy ifandraisany amin’ny raharaha politika mafana eto amin’ny Firenena izao tsy fandriam-pahalemana mahazo vahana tampoka izao ? Raha tsiahivina dia efa nalaza be teto an-drenivohitra izany vely “bois rond” misy fantsika izany, ary efa ela ihany koa no tsy dia nandrenesana trangana fakana an-keriny intsony.
Sao misy ireo mpihevi-dratsy ka miezaka manararaotra ny trangan-javatra misy eto amin’ny Firenena, ka miezaka mamelona indray an’ireny endrika tsy fandriam-pahalemana ireny entina hanakonana ny ezaka goavana ataon’ny Fitondram-panjakana amin’ny fanampiana ny mpiray tanindrazana eo anatrehan’izao loza voajanahary izao ? Tsikaritra mantsy, hoy ny mpamakafaka ara-politika, fa tao anatin’ny fiatrehana ireo takaitra navelan’i Batsirai no re fa miverina indray ny vely “bois rond” amin’ny fantsika, ary ny halatra moto sy ny hafa.